iWatermark प्रो म्याकको लागि
म्याकको लागि आईवटरमार्क प्रो - फोटोहरूको सुरक्षा गर्न # १ वाटरमार्क अनुप्रयोग
नवीनतम: 12 / 14 / 20
आवाश्यक हुन्छ: म्याक 10.9-12.0+
iWatermark प्रो - म्याक ब्याच वॉटरमार्किंग अनुप्रयोग
फोटो र कलाकृतिलाई बचाउन वाटरमार्क अनुप्रयोग। वाटरमार्क्सले तपाईले फेसबुक, इन्स्टाग्राम, आदि मार्फत साझेदारी गर्ने फोटोहरू चोरी हुनबाट रोक्न मद्दत गर्दछ। फ्याँकिनु हुँदैन, एकदम सानो डिजिटल वाटरमार्कले तपाईंको बौद्धिक सम्पत्तीलाई बचाउन मद्दत गर्दछ। सबै भन्दा राम्रो वाटरमार्क र ब्याच वॉटरमार्किंग अनुप्रयोग। सजिलैसँग लोगो, बिटम्याप, भेक्टर, क्यूआर कोड, लाइन, स्टेगनोग्राफिक र more थप वाटरमार्क प्रकारहरू सिर्जना गर्नुहोस्। रिसाइज गर्नुहोस्, पुन: नामकरण गर्नुहोस्, थम्बनेलहरू सिर्जना गर्नुहोस्, र मेटाडाटा प्रबन्ध गर्नुहोस्। असंख्य सुविधाहरू। शुरुवातकर्ताहरू, पेशेवरहरू, र निगमहरू द्वारा प्रयोग गरिएको वाटरमार्क अनुप्रयोग। म्याकका लागि संस्करणहरू, Windows, आईओएस र Android.
"मैले समीक्षा गरेको सब भन्दा राम्रो वाटरमार्क अनुप्रयोग प्लम अमेजिंग द्वारा iWatermark प्रो हो।" थॉमस बोल्ट, सफ्टवेयरहो
"जब यो तपाईंको स्वामित्वको फोटोहरूमा वाटरमार्कहरू थप्नको लागि आउँदछ, म्याकका लागि आईवटरमार्क प्रो भन्दा राम्रो उपकरण छैन।" M.उन्न माईस, म्याकवर्ल्ड
आईवटरमार्क प्रो म्याकका लागि - # १ वाटरमार्क अनुप्रयोग फोटोहरूको मात्रा सुरक्षित गर्न
अन्य ओएसको लागि
रेव्स र समीक्षा
आईवटरमार्क म्याक, विन्डोज, आईफोन, आईप्याड र एन्ड्रोइडका लागि विश्व नम्बर १ डिजिटल वाटरमार्किंग अनुप्रयोग हो। सेकेन्डमा स्टाईलिशली फोटोमा एक प्रतिलिपि अधिकार वाटरमार्क। iWatermark फोटोग्राफरहरू द्वारा र द्वारा बनाईएको हो।
iWatermark प्रो म्याक र विन्डोज को लागी निर्यात गरिएको वाटरमार्क विनिमय गर्न सक्नुहुन्छ। स्ट्यान्डअलोन अनुप्रयोगको रूपमा यसले लाइटरूम, फोटोशप, पिकासा, एसीडीसी, कमुलस, पोर्टफोलियो, फोटोस्टेशन, झी, आईभ्यू, फोटोमेचनिक र अन्य फोटो आयोजकहरूसँग काम गर्दछ। सबै प्लेटफार्महरू र अन्य सफ्टवेयरको संयोजनमा iWatermark सबै भन्दा राम्रो वाटरमार्किंग सफ्टवेयर हो।
आईवटरमार्क आईफोन / आईप्याड र एन्ड्रोइड मा नेटिभ अनुप्रयोगहरू हुन् जुन फोन / ट्याब्लेट क्यामेरासँग सीधा कार्य गर्दछ। आई-वाटरमार्क डिजिटल क्यामेरा, पेशेवरहरू र शुरुवातको साथ कसैको लागि आवश्यक उपकरण हो।
तल स्क्रोल गर्नुहोस् र iWatermark को बारेमा अधिक जानकारीको लागि बाँया लिंकहरूमा क्लिक गर्नुहोस्। वाटरमार्किंग किन राम्रो विचार हो भनेर फेला पार्नुहोस्। प्रत्येक संस्करणमा सुविधाहरूको बारेमा जान्नुहोस्।
"आईवाटार्मार्कको सुन्दरता यसको प्रयोग र कार्यक्षमता को सजिलो संयोजन हो। यदि तपाईं कहिल्यै वाटरमार्किंग प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, वा यदि तपाईंले पहिले नै यो गरिरहनु भएको छ र तपाईं यसलाई छिटो र सजिलो तरिकाले गर्न चाहानुहुन्छ भने, iWatermark सस्तो र प्रभावशाली उपयोगिता हो। मैले अझ पल्म अमेजिंगको iWatermark भन्दा राम्रो समाधान देख्न सकें। ” - ड्यान फ्रेक्स, म्याकवर्ल्ड, m. 4.5 चूहों को
मा लागू गर्नुहोस्
दृश्यात्मक फोटो र
भिडियो फन्ट, आकार, रंग, रोटेशन, आदि परिवर्तन गर्न सेटिंग्सको साथ मेटाडेटा सहित कुनै पाठ।
भिडियो एक वक्र पथमा पाठ।
भिडियो एक ग्राफिक सामान्यतया पारदर्शी .png फाईल हो तपाईको लोगो, ब्रान्ड, प्रतिलिपि अधिकार प्रतीक, आदि। आयात गर्नका लागि।
भिडियो कुनै पनि आकारमा उत्तम ग्राफिक्स प्रदर्शन गर्न over००० भन्दा बढी भित्र-निर्मित भेक्टर (SVG's) प्रयोग गर्नुहोस्।
भिडियो एक भेक्टर बोर्डर जुन छवि वरिपरि फैलाउन सकिन्छ र विभिन्न सेटि aहरूको प्रयोग गरेर अनुकूलित गर्न सकिन्छ।
भिडियो यस कोडिंगमा ईमेल वा url जस्तै जानकारीको साथ बारकोडको एक प्रकार।
भिडियो तपाईंको सिर्जनाहरू साइन इन गर्न वाटरमार्कमा हस्ताक्षर, आयात वा तपाईंको हस्ताक्षर स्क्यान गर्नुहोस्।
अदृश्य फोटो र
भिडियो आईपीटीसी वा फोटो फाइलको एक्सएमपी भागमा जानकारी (जस्तै तपाईंको ईमेल वा युआरएल) थप्दै।
भिडियो StegoMark तस्वीर को डाटा मा नै तपाइँको ईमेल वा यूआरएल को रूप मा जानकारी इम्बेड गर्न को लागी हाम्रो स्वामित्वात्मक स्टेगोनोग्राफिक विधि हो।
दृश्यात्मक फोटो फोटोको आकार बदल्नुहोस्। विशेष गरी इन्स्टाग्रामका लागि उपयोगी
दृश्यात्मक फोटो धेरै फिल्टरहरू जुन फोटोको दृश्यलाई स्टाइलाइज गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
विकल्पहरू निर्यात गर्नुहोस्
भिडियो ढाँचाहरू, जीपीएस र मेटाडाटाका लागि निर्यात विकल्पहरू छनौट गर्नुहोस्
"तल लाइन: यदि तपाइँ वेबमा तपाइँको ग्राफिक सामग्री वाटरमार्क को लागी एक तरिका खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामी iWatermark + सिफारिस गर्दछौं।"- Nate Adcock, iPhoneLife Magazine 1/22/15
आईफोन / आईप्याड, म्याक, विन्डोज र एन्ड्रोइडका लागि नेटिभ अनुप्रयोगहरू
११ प्रकारका वाटरमार्कहरू
पाठ, ग्राफिक, QR, हस्ताक्षर, मेटाडेटा र स्टेगनोग्राफिक।
सबै क्यामेराहरू, निकन, क्यानन, सोनी, स्मार्टफोनहरू, आदिसँग काम गर्दछ।
एकल वा ब्याच वाटरमार्क बहुविध तस्वीरहरू एकै साथ प्रक्रिया गर्नुहोस्।
लेखक, प्रतिलिपि अधिकार र कुञ्जी शब्दहरू जस्तै मेटाडाटा प्रयोग गरी वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
फोटोमा इम्बेड गरिएको जानकारीमा हाम्रो स्वामित्व अदृश्य स्टेगोमार्क वाटरमार्क थप्नुहोस्
QR कोड वाटरमार्क
Url, ईमेल वा वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि अन्य जानकारीको साथ अनुप्रयोग QR कोडहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
विभिन्न फन्ट, आकार, र ,्ग, कोण, आदि सहित पाठ वाटरमार्क सिर्जना गर्नुहोस्।
पारदर्शी ग्राफिक फाइलहरू प्रयोग गरेर ग्राफिक वा लोगो वाटरमार्कहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
तपाइँका सबै वाटरमार्कहरू तपाइँ र तपाइँको व्यवसायको लागि एक ठाउँमा राख्नुहोस्
तपाईंको हस्ताक्षर वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्नुहोस् प्रख्यात चित्रकारहरू जस्तै
बहु एक साथ वाटरमार्क
एक फोटो (हरू) मा बहुविध वटरमार्कहरू चयन गर्नुहोस् र लागू गर्नुहोस्।
फोटोमा तपाईंको प्रतिलिपि अधिकार, नाम, url, ईमेल, आदि प्रयोग गरेर वाटरमार्क।
ड्ररबाट वाटरमार्कको एक वा धेरै संख्या चयन गर्नुहोस्।
GPS स्थान डेटा
गोपनीयताका लागि जीपीएस मेटाडाटा राख्नुहोस् वा हटाउनुहोस्
फोटोहरू पुनःआकार गर्नुहोस्
दुबै म्याक र विन संस्करणमा फोटोहरूलाई पुनःआकार दिन सकिन्छ।
GPU, CPU र समानान्तर प्रशोधन जल गति प्रयोगको गतिमा प्रयोग गर्दछ।
JPEG, PNG, TIFF र RAW
फोटोहरु लाई सुरक्षित गर्नुहोस्
तपाईंको फोटोहरूलाई रक्षा गर्न धेरै फरक पानी प्रयोग गर्ने तरिकाहरू प्रयोग गर्नुहोस्
चोरहरूलाई चेतावनी दिनुहोस्
एउटा वाटरमार्कले मानिसहरूलाई याद दिलाउँछ कि फोटो कसैको बौद्धिक सम्पत्ति हो
एडोब लाइटरूम, फोटोहरू, एपर्चर र सबै अन्य फोटो ब्राउजरहरू जस्तै अनुप्रयोगहरूमार्फत
वाटरमार्क निर्यात गर्नुहोस्
निर्यात, ब्याकअप र आफ्नो वाटरमार्क साझा गर्नुहोस्।
फोटोहरूको पूर्व र पोष्ट प्रशोधनको लागि विशेष प्रभावहरू
कुनै पनि भाषामा वाटरमार्क। धेरै भाषाहरूको लागि स्थानीयकृत
पूर्ण स्थिति नियन्त्रण गर्नुहोस्
वाटरमार्क्स पिक्सेल द्वारा समायोजित गर्न सकिन्छ।
सापेक्ष स्थिति नियन्त्रण गर्नुहोस्
बिभिन्न अभिमुखिकरण र आयामहरूको फोटोहरूको समूहहरूमा समान स्थितिका लागि।
ईमेल, फेसबुक, ट्विटर र अन्य सामाजिक मिडिया साइटहरू मार्फत साझेदारी गर्नुहोस्।
पुन: नामाकरण गर्नुहोस्
स्वचालित रूपमा तस्विरहरूको ब्याचहरू पुन: नामाकरण गर्न कार्यप्रवाह सेट अप गर्नुहोस्।
ब्याच वाटरमार्क छविहरूका सम्पूर्ण फोल्डरहरू एकैचोटि।
एकैसाथ धेरै वटरमार्कहरू प्रयोग गर्नुहोस् (प्रो मात्र) ।इम्पोर्ट / निर्यात / साझा वाटरमार्कहरू तपाईंले सिर्जना गर्नुभयो (प्रो मात्र)।
तपाईंको सबै छविहरू उही आकारको मापन गर्नुहोस्।
तपाईंको वाटरमार्क गरिएका छविहरूका थम्बनेलहरू सिर्जना गर्दछ। तपाईंको वाटरमार्कहरूको लागि पाठ, TIFF वा PNG लोगो प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईंको वाटरमार्कको पारदर्शिता सेट गर्नुहोस्।
घुमाउनुहोस्, स्केल गर्नुहोस्, र तपाईंको वाटरमार्क राख्नुहोस्, जहाँ कहीं तपाईंको तस्वीरमा।
विशेष प्रभावहरू प्रयोग गर्नुहोस् जस्तै एक्वा, छाया र / वा तपाईंको वाटरमार्कमा एम्बोस।
छविसँग कब्जा गरिएको मेटाडाटा संरक्षण गर्नुहोस्, जस्तै EXIF, IPTC र XMP।Input र तपाईंको वाटरमार्क गरिएको छविलाई विभिन्न छवि स्वरूपहरूमा विविधतामा आउटपुट गर्नुहोस्।
कम महँगो, अधिक कुशल, छिटो र सरल तर फोटोशप प्रयोग गर्न। आईवटरमार्क विशेष रूपमा वाटरमार्किंगका लागि डिजाइन गरिएको हो।
QR कोडहरू सिर्जना गर्नुहोस् र प्रयोग गर्नुहोस् (जस्तो बारकोडहरू) वाटरमार्क (प्रो र आईफोन / आईप्याड मात्र)
X, y द्वारा स्थान वाटरमार्क सेट गर्नुहोस् जसले तपाईंको वाटरमार्कलाई उही ठाउँमा देखा पर्दछ जुन छविहरूको आकार वा रिजोलुसन फरक पर्दैन।
सूची गर्न को लागी धेरै सुविधाहरु। यसलाई मुक्त गर्न को लागी डाउनलोड गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले ईमेल, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, आदि मार्फत लिनुभएको अचम्मको फोटो साझा गर्नुभयो भने यो भाइरल हुन सक्ने धेरै सम्भावना हुन्छ भने उनीहरू विश्वव्यापी रूपमा तपाईंको नियन्त्रणबाट बाहिर उडेर जान्छन् र तपाईंलाई सर्जकको रूपमा कुनै सम्पर्क बिना नै। तर डिजिटली तपाईंको काम / फोटो / ग्राफिक / आर्टवर्कमा iWatermark प्रयोग गरेर तपाईंको नाम, ईमेल वा url को साथ हस्ताक्षर गर्नुहोस् र तपाईंको फोटोहरूमा तपाईंसँग दृश्यात्मक र कानुनी सम्बन्ध छ जहाँ उनीहरू गए।
तपाइँको सबै छविहरूमा तपाइँको कम्पनी लोगो राखेर तपाईको कम्पनी ब्रान्ड निर्माण गर्नुहोस्।
वेबमा वा विज्ञापनमा कतै तपाईंको कलाकृति देखेर आश्चर्यचकित हुनबाट बच्नुहोस्।
चोरी र टाउको दुखाइ नगर्नुहोस् जसले दावी गर्छन् कि उनीहरूलाई थाँहा थिएन कि तपाईंले यो सृष्टि गर्नुभयो।
त्यस पछि संलग्न हुन सक्ने महँगो मुद्दा चलाउनबाट जोगिनुहोस्।
बौद्धिक सम्पत्ती स्क्वाबललाई वेवास्ता गर्नुहोस्।
फोटो चोरी उदाहरणहरू
अवैध फोटोहरू अवैध रूपमा प्रयोग गरियो
किन iWatermark एक राम्रो विचार हो। अनुमति बिना प्रयोग गरिएका फोटोहरूका यी कथाहरू जाँच गर्नुहोस्। नयाँ ब्राउजर ट्याबमा खुल्छ।
धेरै वाटरमार्क अनुप्रयोग एक पाठ वाटरमार्क गर्न सक्छन् र केहि एक ग्राफिक वाटरमार्क छ। iWatermark ले यो धेरै टाढा लिन्छ र १२ वटरमार्क प्रकारहरू छन्। प्रत्येक प्रकारको फरक उद्देश्य हुन्छ।
अदृश्य बनाम दृश्यमान
केही वाटरमार्कहरू दृश्यमान छन् र अरूहरू अदृश्य छन्। दुबै बिभिन्न उद्देश्यहरूको सेवा गर्छन्।
एक दृश्य वाटरमार्क त्यो हो जहाँ तपाईं तपाईंको लोगोमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ वा तपाईंको छविमा हस्ताक्षर।
एक अदृश्य वाटरमार्क तस्विर भरि लुकाइएको छ, कोड भित्र यो उत्पन्न गर्दछ, एक पहिचान योग्य बान्की हो जुन यसलाई तपाइँको कलाकृति भएको रूपमा पहिचान गर्दछ।
यो प्रविधिको प्राय: धेरै महँगो हुन्छ र दुई ठूला कमजोरीहरू हुन्छन्। यसले लगभग सँधै तस्वीरको गुणवत्ता कम गर्दछ, र यसले मानिसहरूलाई तपाईंको कामको प्रतिलिपि गर्न प्रोत्साहित गर्दछ किनकि यो प्रतिलिपि अधिकार नभएको देखिन्छ। दुबै केसहरूमा कुशल ग्राफिक डिजाइनरले तपाईको छवि प्रयोग गर्न चाहेकोले तपाईको वाटरमार्क हटाउने तरिकाहरू छविको गुणस्तरमा खर्च गर्न सक्दछन्।
हामी यो महसुस गर्दछौं कि जब तपाईले फोटोहरू वाटरमार्क गर्दा यसले २ उद्देश्यहरू पूरा गर्दछ।
१. यसले मानिसहरूलाई थाहा दिन्छ कि यो कुनै उपयोगको लागि केवल एक फोटो बनाउन उपलब्ध छैन।
२. यसले तपाइँको जानकारी समावेश गर्न सक्छ। जस्तै नाम, ईमेल, साइट, तपाईंले प्रदर्शन गर्न चाहानुहुन्छ त्यसैले मानिसहरूले तपाईंलाई सम्पर्क गर्न सक्दछन्।
iWatermark को एक आधिकारिक प्रायोजक हो:
आईवटरमार्क प्रो वा म्याक / विन र आईवटरमार्क + को आईफोन / आईप्याड / एन्ड्रोइडको तुलना
IWatermark को सबै संस्करणहरू त्यो OS को लागि मातृभाषामा लेखिएका छन्। म्याक र विन सँग समान सुविधाहरू छन् किनकि ती दुबै डेस्कटप प्रणालीहरू हुन्। २ मोबाइल ओएस संस्करण आईओएस र एन्ड्रोइडसँग एक अर्कासँग समान सुविधाहरू छन्।
iWatermark सुविधाहरू आईओएस र एन्ड्रोइडमा म्याक र विन्डोजमा
डाउनलोड आईओएस Android म्याक Windows
फोटोहरूको अधिकतम संख्या असीमित (मेमोरीमा आधारित) असीमित (मेमोरीमा आधारित)
एकसाथ वाटरमार्क असीमित असीमित
गति Bit 64 बिट (धेरै छिटो) Bit 64 बिट (द्रुत)
समानान्तर प्रशोधन अवेयर बहु-थ्रेडले बहु CPU / GPU को प्रयोग गर्दछ बहु-थ्रेडले बहु CPU / GPU को प्रयोग गर्दछ
AppleScriptable (केवल म्याक) - हो, स्क्रिप्ट र स्क्रिप्ट मेनू समावेश गर्दछ
Win एक्सप्लोररका लागि शेल विस्तार - वाटरमार्क सिधा लागू गर्न दायाँ क्लिक गर्नुहोस्।
रंग प्रोफाइलहरू - अवस्थित र चयन योग्य प्रोफाइलहरू प्रयोग गर्दछ
आउटपुट फोल्डर उपलब्ध निर्यात विस्तारहरू प्रयोग गर्दछ फोल्डर आउटपुट सेटिंग्स
इनपुट फाइल प्रकारहरू RAW, JPG, PNG, TIFF, GIF, DNG, PSD
आउटपुट फाइल प्रकारहरू jpg jpg, png, tiff, psd, bmp, jpeg २०००, clipb
फोटोहरू पुनःआकार गर्दै Major प्रमुख विकल्पहरू
वाटरमार्क आयात गर्नुहोस् आईओएस मा, एन्ड्रोइड को लागी आउँदैछ हो, म्याक वा विन संस्करणबाट
वाटरमार्क निर्यात गर्नुहोस् आईओएस मा, एन्ड्रोइड को लागी आउँदैछ अभिलेख गर्नुहोस् वा म्याक वा विन संस्करणमा साझेदारी गर्नुहोस्
वाटरमार्क सम्पादन गर्नुहोस् उन्नत (धेरै धेरै सुविधाहरू) उन्नत (धेरै धेरै सुविधाहरू)
वाटरमार्क ड्रअर संगठित गर्नुहोस्, सम्पादन गर्नुहोस्, पूर्वावलोकन गर्नुहोस् संगठित, सम्पादन, लक, पूर्वावलोकन, इम्बेड गर्नुहोस्
वाटरमार्क ड्रपलेट सिर्जना गर्नुहोस् - समर्पित वाटरमार्किंग अनुप्रयोग सिर्जना गर्दछ
मेटाडाटा (XMP, IPTC) आईपीटीसी XMP र IPTC विस्तारित
मेटाडाटा थप्नुहोस् / हटाउनुहोस् IPTC / XMP / GPS IPTC / XMP / GPS
वाटरमार्कमा इम्बेड मेटाडाटा IPTC / XMP / GPS IPTC / XMP / GPS
वाटरमार्कको रूपमा मेटाडाटा ट्यागहरू IPTC, टिफ, फाईल एट्रिब्यूट्स, Exif, GPS IPTC, टिफ, फाईल एट्रिब्यूट्स, Exif, GPS
प्रभाव धेरै धेरै
वाटरमार्क स्थान ड्र्याग र पिन गरेर सेट गर्नुहोस्। ड्र्याग र पिन गरेर सेट गर्नुहोस्।
स्केल वाटरमार्क वास्तविक, तेर्सो र ठाडो वास्तविक, तेर्सो र ठाडो
पाठ वाटरमार्क ढाँचा फन्ट, आकार, रंग, रोटेशन, पारदर्शिता, छाया, बोर्डर फन्ट, आकार, रंग, रोटेशन, पारदर्शिता, छाया, बोर्डर
पृष्ठभूमि रंग, अस्पष्टता, स्केल, बोर्डर, छाया, रोटेशन रंग, अस्पष्टता, स्केल, बोर्डर, छाया, रोटेशन
मदत अनलाइन, प्रासंगिक र विस्तृत अनलाइन, प्रासंगिक र विस्तृत
वाटरमार्कको रूपमा QR कोडहरू QR कोडहरू वॉटरमार्कको रूपमा प्रयोग सिर्जना गर्नुहोस् QR कोडहरू वॉटरमार्कको रूपमा प्रयोग सिर्जना गर्नुहोस्
क्रिएटिव कमन्स वाटरमार्क - सजिलैसँग कुनै पनि CC वाटरमार्क थप गर्दछ
द्रुत लुक प्लगइन - निर्यात गरिएको वाटरमार्क जानकारी प्रदर्शित गर्दछ
सबै फोटो ब्राउजरहरूको साथ काम गर्दछ हो हो
आईफोटो प्लगइन - आईफोटोमा वाटरमार्क प्रत्यक्ष
मूल्य नि: शुल्क, $ १.1.99 र $ 3.99 संस्करण आईट्यून्स / गुगल प्ले शेयरवेयर
"आई-वाटरमार्क प्रो अहिलेसम्म सब भन्दा सुविधायुक्त प्याक वाटरमार्किंग सफ्टवेयर हो जुन मैले समीक्षा गरें, र यससँग धेरै सुविधाहरू छन् जुन मैले अरू कुनै कार्यक्रममा फेला पारेन।" - सर्वश्रेष्ठ वाटरमार्किंग सफ्टवेयर २०१ - - थॉमस बोल्ड
आईफोन / आईप्याड / आईओएस आईवटरमार्क +
आईवटरमार्कका लागि आईफोन / आईप्याड / आईओएस। अधिक तब आईट्यून्स अनुप्रयोग स्टोरमा १1500०० भन्दा बढी तारा समीक्षा।
IWatermark प्रो को म्याक संस्करण
//१//१ जर्मनमा GIGA द्वारा समीक्षा
Tumblr मा समिक्षाको संग्रह
“फोटोहरू पाए? तपाइँको प्रतिलिपि अधिकार दावी गर्न प्रत्येकमा एक वाटरमार्क राख्नुहोस् "- जेफ्री मिनर, बोहेमियन बुमेर
इटालियन पत्रिका SlideToMac
एल। डेभनपोर्ट द्वारा iWatermark प्रो को SMMUG समीक्षा
IWatermark प्रो को लागी स्विडेनी भाषा मा धेरै गहन समीक्षा। हेनिंग वर्स्ट। सम्पूर्ण लेख पढ्नुहोस्
"यो यसको प्राथमिक उद्देश्यको लागि राम्रो अनुप्रयोग हो, तपाईंको डिजिटल छविहरूमा भिजुअल वाटरमार्क मर्ज गर्नुहोस्, र यसले यो काम सजिलैसँग पूरा गर्दछ र केही राम्रो सुविधाहरूको साथ तपाईंको जीवन सजिलो बनाउँदछ।"
क्रिस दुदर, एटीपीएम
सम्पूर्ण लेख पढ्नुहोस्
“यदि तपाईंले धेरै छविहरूमा वाटरमार्कहरू थप्न आवश्यक छ भने, iWatermark तपाईंको बोक लागि ठूलो धमाका प्रदान गर्दछ। यसले आफ्नो मुख्य कार्यमा मात्र सफलता हासिल गर्दैन, तर यसले प्याकेजमा अन्य धेरै बहुमूल्य समय बचत सुविधाहरू थप गर्दछ। ”
जे नेल्सन, Macworld, m. m चूहों को।
"आईवाटार्मार्कको सुन्दरता यसको प्रयोग र कार्यक्षमता को सजिलो संयोजन हो। यदि तपाईं कहिले पनि वाटरमार्किंग एक प्रयास दिन चाहानुहुन्छ, वा यदि तपाईंले पहिले नै यो गरिरहनु भएको छ र तपाईं यसलाई छिटो र सजिलो तरिकाले गर्न चाहानुहुन्छ भने, आईवटरमार्क सस्तो र प्रभावशाली उपयोगिता हो। मैले स्क्रिप्ट सफ्टवेयरको $ २० आईवाटमार्क भन्दा राम्रो समाधान देखेको छु। ”
ड्यान फ्रेक्स, म्याकवर्ल्ड
छवि प्रतिलिपि अधिकार सफ्टवेयर जसले एक वा एक टन बचाउँछ
"यो सरल देखिने उत्पादन खेल को धेरै सुविधाहरु खेल र लगभग सबै कल्पना फाइल प्रकार समर्थन गर्दछ। धेरै सरल, सफा, ड्र्याग एण्ड ड्रप इन्टरफेस सुन्दर ढ works्गले काम गर्दछ र तपाईंको कार्यमा तपाईंको छाप राख्न केही प्राथमिकता समायोजनहरू आवश्यक हुन्छ। थप रूपमा, सफ्टवेयरले एक्सचेन्जेबल छवि फाइल (EXIF) र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेस दूरसंचार काउन्सिल (आईपीटीसी) संरक्षण कोड समर्थन गर्दछ।
त्यहाँ केहि अन्य पानी मार्कि share सेयरवेयर आईटमहरू छन्, तर यी विस्तृत कुनै पनि छैनन् र आईपीटीसी ढाँचाको साथ समर्थन प्रस्ताव छ। ”
डेनियल एम। ईस्ट, म्याक डिजाइन म्यागजिन, रेटिंग:
“तपाईं कसरी आफ्नो चित्रहरु रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ? प्लम अमेजिंगसँग सस्तो ($ २०) र सरल समाधान छ: आईवटरमार्क। यो प्रयोग गर्न एक हावा हो। केवल एकल तस्विर वा तस्विरहरूसहितको तस्बिर तान्नुहोस् IWatermark स्क्रिनमा यसलाई बताउन कुन छविहरू वाटरमार्कमा छ, तब वाटरमार्क पाठ निर्दिष्ट गर्नुहोस्, जस्तै "© २०० D डेभ जॉनसन। यहाँ छ जहाँ कार्यक्रम वास्तवमा राम्रो हुन्छ: तपाइँ पाठको सट्टा वाटरमार्क छवि निर्दिष्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको मतलब यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने छविको कुनामा आफैंको सानो तस्वीर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि वाटरमार्क स्थान सेट गर्नुहोस् - जस्तै कुना वा फ्रेमको बीचमा - र यसलाई च्यात्न दिनुहोस्। "
डेव जोसन, पीसी विश्व
म्याक्सिमम न्यूज समीक्षाले यसलाई १० ताराहरू मध्ये9स्टार दिए।
डिजिटल क्यामेरा पत्रिका लेख को पीडीएफ
दृश्य (iWatermark) र अदृश्य (DigiMark) वाटरमार्किंग को तुलना
Cnet डाउनलोड5चूहों
“एउटा विचार मलाई तपाईंको उत्पादनको बारे मनपर्‍यो भन्ने छ कि वाटरमार्कको प्लेसमेन्ट पिक्सेल पक्षको प्रतिशतमा आधारित छ, पिक्सेलको विशेष संख्यामा होइन। त्यो महत्वपूर्ण स्थान हो? म २ 24.5.MP एमपी क्यामेरा र धेरै १२ एमपी क्यामेराको साथ शूट गर्छु। यदि म मेरो उत्पादनको चित्रको तलको अन्य उत्पादनहरूसँग नजिक चाहन्छु भने म तिनीहरूलाई कति पिक्सेलहरू भन्नु पर्छ। यदि मैले २.12..24.5 एमपी तस्वीरको साथ काम गरें भने पिक्सेलको स I्ख्या चाहान्छु। म तलको तस्बिर चाहान्छु १२ एमएमपी चित्रको तुलनामा भिन्न हुन जान्छ। तपाईं अनुप्रयोगले आकारको% प्रयोग गर्दछ। म तपाईलाई दुई धेरै फरक आकारका तस्वीरहरूमा अनुप्रयोग चलाउन सक्छु र लोगोको प्लेसमेन्ट सधैं समान हुनेछ। मलाई लाग्छ कि यो राम्रो बिक्री बिन्दु हो। ”
स्कट बाल्डविन - scottbaldwinphotography.com
"एक प्रो सर्फ फोटोग्राफर मेरो फोटोहरु प्रकाशित गर्न को लागी प्रयास गर्न को रूप मा, iWatermark सबै भन्दा राम्रो been 20 म कहिल्यै खर्च गरेको छ! सबैजना तपाईले तिनीहरुलाई फोटोहरु को लागी ईमेल गर्न को लागी चाहानुहुन्छ तर ठाडो र तेर्सो ढाँचा समायोजित गर्न म्यानुअल रुपमा वाटरमार्कहरु जोड्नको लागि समय लाग्यो। मैले फोटोशप एलिमेन्ट्स ब्याच प्रोसेसिंग प्रयोग गर्ने प्रयास गरें। PS5 मा गर्न यो धेरै जटिल छ। यस कार्यक्रमले फोटोहरूको फोल्डर द्रुत रूपमा वाटरमार्क गर्न र विभिन्न प्रकाशकहरूलाई पठाउन मलाई धेरै समय बचत गर्यो। ”
Diane एडमंड्स - YourWavePics.com
"मैले मेरो तस्विरहरूलाई वटरमार्क गर्नका लागि विभिन्न सफ्टवेयरको प्रयास गर्दै मैले युगौंयुग बितेको छु, विभिन्न प्रकारका प्रयासहरू पछि मैले तपाईलाई भेट्टाए तर तपाईको शंका के छ भने सब भन्दा सजिलो र सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मैले भेट्टाएको छु, उत्कृष्ट उत्पादनको लागि धन्यवाद, शीर्ष वर्ग "
पिटर Kearns - www.pfphotography.co.uk
“म अबको लागि iWatermark प्रयोग गर्दै छु र यो मनपर्दछ। गत वर्ष मैले मेरो बिक्रीको धेरै हिस्सा गुमाएँ, परिवारहरूले मेरो साइटबाट वालेट आकारका तस्वीरहरू डाउनलोड गर्दा। यस वर्ष म iWatermark प्रयोग गर्दै छु र मेरो बिक्री माथि छ। व्यक्तिहरू चित्रको मध्य भागमा प्रतिलिपि अधिकार जानकारी हेर्न चाहँदैनन्। यो एक महान उत्पादन, महान मूल्य र सबै प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो हो। मेरो उत्पादन रक्षा गर्न मद्दत गर्नुभएकोमा धन्यवाद! शान्ति, "
क्रिस, एक्शन डिजिटल फोटोग्राफी
“तपाईको प्रोग्रामले मलाई ठूलो सहयोग गर्यो। म नियमित रूपमा मेरो विवाह, घटना र पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ইভেন্টपिक्स डॉट कॉममा राख्छु। यसले हाम्रो कामको अनधिकृत प्रयोग रोक्न मद्दत गरेको छ र म पक्का छु कि यसको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। हामी एक ठूलो कार्यक्रम को लागी खुसी थिए। "
जोन राइट, J&K Creative! - http://www.artbyjon.com
“म भाडाका लागि घरहरू क्र्यागलिस्टमा सूचीबद्ध गर्दछु र मेरा केही फोटोहरू हाईज्याक हुनुभन्दा पहिले मैले iWatermark खरीद गरें। अब जालसाजीहरूले अर्को लक्ष्य लिने छन किनकि मेरो वेब साइट चित्रमा प्लास्टर गरिएको छ! ”
फोटोशप (क्विकटाइम आवश्यक छ)
PICT (म्याकिन्टोश मात्र)
BMP (विन्डोज मात्र)
अधिक प्रारूपहरू क्विकटाइमको साथ समर्थित। क्विकटाइम OSX चालु सबै म्याकहरूमा पूर्व स्थापित छ, र दुबै पीसी र म्याकको लागि डाउनलोड गर्न स्वतन्त्र छ।
⁃ न्यूनतम ओएस १०.10.8 वा पछिल्लो… बिग सुर ११.० समावेश सहित
The ग्राफिक वाटरमार्क सम्पादकमा छवि थप्ने तरिकाहरू थपिए।
--- छविमा वा लोगोको ड्रपलाई कुवामा तान्नुहोस्
--- वा पहिलेको रूपमा छवि चयन गर्न 'सेलेक्ट' बटन प्रयोग गर्नुहोस्।
--- वा cmd-G छवि फाइल चयन गर्न प्रयोग गर्नुहोस्
English अ English्ग्रेजी स्थान अपडेट गरियो
Big बिग सुर ११.० मा क्र्याक्स फिक्स्ड
Dra ड्रअर हटाउनुहोस् - आईक्लाउड मेनू
⁃ फिक्स्ड फाइल-> नयाँ - एक्स लाइन को लागी आइकन।
Some केही वाटरमार्क हराइरहेको र onमा फिक्स्ड क्र्यास।
हराएको भेक्टर ग्राफिक लाइब्रेरी check / चित्रहरू / iWatermark भेक्टर क्लिपार्ट हराउन को लागी जाँच। चित्र फोल्डरमा हराइरहेको खण्डमा पुनः उत्पन्न हुन्छ।
Out रूपरेखा र color परिवर्तनको साथ पाठ ग्राफिक्स सम्पादन गर्दा वा प्रयोग गर्दा क्र्यास फिक्स गरियो।
Apple एप्पल सिल्कन समर्थनको लागि तयारीमा पुस्तकालय सफा गरियो
अझै बाँकी मुद्दाहरू
⁃ WebP ढाँचा समर्थित छैन
And फिल्टर र इनपुट स्क्यानले छवि फाइल रिपोर्ट गर्दैन जुन पढ्न योग्य छैन (.WebP आदि) लगमा पढ्न योग्य छैन।
- म्याक ओएस १०.० मा फिर्ता समर्थन गर्न अद्यावधिक गरियो
- अर्को छवि र संपादन पृष्ठभूमि रंग को लागी सम्पादक आईकन (दुई आइकन तल्लो दायाँ) मा उपकरण सल्लाह थपियो
- स्थिर स्थिति पाठ डार्ममोडमा पढ्न योग्य छैन
- आईपीटीसी डाटा बचत नभएको साथ स्थिर मुद्दा इनपुट मेटाडेटा प्रतिलिपि भइरहेको थिएन (प्रयोगकर्ता वाल्टर फ्रीजर द्वारा रिपोर्ट गरिएको)।
- पहिलो छविको साथ स्थिर मुद्दा अफसेट सेटिंग्स लागू गरिरहेको छैन।
- समाधान अफसेट मुद्दा
- स्थानीयकरणमा माइनर कोड अपडेट
- नयाँ xcode मा नयाँ कम्पाईलर चेतावनीको लागि समाधान
- एप्पल नोटराइज्ड
- UI को साथ धेरै डार्क मोड मुद्दा फिक्स गरियो।
- IW * क्लाउड समर्थन हटाईयो।
- तय बोर्डरहरू र भेक्टर ग्राफिक्स। क्लिपार्ट विन्डोमा ।D_S_Store देखाउँदै
- UI मा निश्चित बग जहाँ पाठ क्लिप गर्दै थियो।
- स्थिर Stegomark पठन v2.5.0 मा 2.5.2 मा भाँचियो। ती संस्करणहरूसँग सिर्जना गरिएको कुनै पनि स्टीगोमार्क अन्य ओएस वा अन्य संस्करणहरू द्वारा पढ्न योग्य हुँदैन।
- नयाँ साइट इजाजतपत्र फाइलमा सफाई अपग्रेड गर्दै।
रिसेट पछि कुनै पूर्वनिर्धारित वाटरमार्क चयन गर्दा क्र्याससँग निश्चित बग।
- जापानी स्थानीयकरण
- मद्दत मेनूमा अपडेट URL र? नयाँ वेबसाइट लेआउटका लागि प्रत्येक स्क्रिन बटन गर्नुहोस्
- वाटरमार्क प्रबन्धक अब exif / iptc ट्याबबाट उपलब्ध छ
- iW • क्लाउड - पासवर्ड बिर्सनुभयो। कुनै सन्देश प्रदर्शित छैन यदि ईमेल प्रविष्ट गरिएको छैन।
- रिसाइज टेम्प्लेटहरू आईओएस सबमेनू आईटमहरूको लागि निश्चित गरिएको छ। कोड केस-असंवेदनशील हुन परिवर्तन भयो।
- अद्यावधिकका लागि जाँच गर्नुहोस् - क्लीनअप रिलिज नोटहरू तसर्थ अन्य लाइनहरूको साथ पहिलो लाइन लाइन।
- आईपीटीसी क्रिएटर / लेखक पूर्वनिर्धारितको रूपमा आईवाटरमार्कमा सेट
- चयनित वाटरमार्क (हरू) लाई PhotoNotary मा अपलोड गर्ने ब्यबहार परिवर्तन भयो
--- पुरानो व्यवहार: सबै मर्ज गरिएको वाटरमार्कको रूपमा चयनित अपलोड गर्नुहोस्
--- नयाँ व्यवहार: एक पछि अर्को सबै चयन गरिएको वाटरमार्क अपलोड गर्नुहोस् विकल्प कुञ्जी प्रेस नगरे सम्म तिनीहरू मर्ज र अपलोड हुनेछन्।
- बहु वाटरमार्कहरूको चयनमा निश्चित बग। कहिलेकाँही ग्राफिक थपिने छैन यदि बहु वाटरमार्क चयन गरियो।
- बग फिक्स / सुविधा: एक पटकमा लागू भइरहेको बहु ग्राफिक्स / QR कोड / हस्ताक्षरहरूको सुधारित ह्यान्डलिंग।
- Ui को अपडेट भागहरू
- म्यानुअल अपडेट र सुधार गरीयो।
- साइट लाइसेन्स समर्थन जोडियो
- नयाँ नमूना एपलस्क्रिप्ट दुई आकारको छवि बनाउनको लागि एउटा वाटरमार्क गरीएको छ र एउटा होईन। एप्लिकेसनहरू सबै 'iWatermarkApplescrpts.zip' फाइलमा समेकित छन् जुन म्यानुअलको एप्प्लस्क्रिप्ट सेक्सनमा पाइन्छ।
- फाइल मेनूमा "Stegomark दर्शक" थपियो। यसले स्ट्यागमार्क गरिएका छविहरूमा पाठ हेर्न ड्र्याग र ड्रप वा फाइल चयन गर्दछ। ब्राउजरबाट छवि तान्ने सहित। लुकाइएको सामग्री पढ्नुहोस् जब केहि हुन्छ।
- फन्ट प्यानलका साथै फन्ट मेनूको लागि उत्तम समर्थन थपियो
- फन्ट प्यानलको साथ स्थिर र color्ग रूपान्तरण बचत गरिएको मनपर्ने फन्टहरू प्रयोग गर्दा
- स्थिर क्र्यास जब कुनै ड्रप छाया रंगको साथ वस्तु सम्पादन गर्दै
- केहि सुरक्षा स्कोप कोड थप्नुहोस् आशामा वाटरमार्क ग्राफिक सन्दर्भलाई बाह्य हार्डवेयरबाट बाहिरको प्रयोगकर्ता तस्वीर फोल्डरबाट अनुमति दिनुहोस्।
- ग्राफिक्स सम्पादन UI लाई ग्राफिक्स नकआउट व्हाइटको लागि अपडेट गरिएको छ अब सन्देश देखाउँदछ र फिर्ता अफमा फर्किन्छ, यदि ग्राफिक्ससँग पहिले नै अल्फा वा मास्क यससँग सम्बन्धित छ।
- केहि कोड हटाईयो जसले ग्राफिकको "पथ" को लागी जाँच गर्‍यो। सुरक्षा स्कोप कोडको लागि परिवर्तनको साथ अब यो आवश्यक छैन
- फिक्स्ड: StegoMark लागू गर्न को लागी मुद्दा जब धेरै वाटरमार्क चयन छ।
- अतिरिक्त लग कथनको क्लीनअप, र अप्टिमाइज गरिएको जानकारी लग
- फिक्स्ड: स्टेगोमार्क चयन विफलका साथ वाटरमार्किंग होईन। यो जोड्नु हुँदैन।
- ब्यानर वाटरमार्क अब रूपरेखा प्रभाव।
- संवर्द्धन: पाठ प्रभाव रूपरेखा अब रंग र रूपरेखा चौडाई समायोजित गर्न सक्नुहुन्छ। पूर्वनिर्धारित २ पिक्सेल, र सेतोको चौडाईमा सेट गरियो। प्रभाव मेनूमा तपाईं यी प्यारामिटरहरू सेट गर्न सक्नुहुनेछ। १ देखि p० पिक्सेलको चौडाई। रंगहरू यसमा सेट गर्नुहोस्: रातो, निलो, हरियो, पहेंलो, कालो र सेतो
- V2.0.10% प्रयोग गर्दा कहीं पनि अनुमति दिए, पिक्सेल मात्र -75 देखि 95 p पिक्सेल चयनित धार बाट।
- गलत वाटरमार्क चयन गर्दा फिक्स एप्पेलस्क्रिप्ट त्रुटि (यसको रिपोर्टको लागि XYX धन्यवाद)।
- पिक्सलका लागि अधिकतम अफसेट समायोजित गर्नुहोस् आकार अधिकतम आकार वा P०० पिक्सेल रिसाइज गर्न।
नोट: रिसाइज अधिकतम सेट हुन्छ जब सम्पादक खोल्दा, बन्द हुन्छ, आकार समायोजन गर्दछ र अपडेटको लागि पुनः खोल्दछ। अधिकतम अफसेट अझै%% दायरा अझै पनी 75% देखि%%% छ
- माइनर मेमोरी लीक फिक्स।
- ग्राफिक UI मा ठीक ठाडो मापन गर्न पूर्वावलोकन छवि समायोजित गर्नुहोस्।
- विन्डोज V3.0.9 बीटा को लागी iWatermark प्रो संग लेआउट को लागी केहि फिक्सहरु।
- पुन: आकार टेम्प्लेट मेनूमा प्राय: प्रयोग गरिएको प्रीसेटहरू थपिएको प्रकारले उप-मेनूहरू प्रकारहरू समावेश गर्दछ
- स्थिर डेमो so ताकि यो सम्पादन पछि पनी7after% मा पुन: आकार दिन्छ। यो संस्करण अघि यो स्केलि off बन्द गरीएको छ सम्पादन गरिएको छ।
- सबै डेमो वाटरमार्कहरू सफा गर्नुहोस् (पूर्वावलोकन हटाउनुहोस् र HTML निर्यात गर्नुहोस् यदि तिनीहरू निर्यात गरियो भने पुन: उत्पन्न हुन्छन्) र हालको ढाँचा र पूर्वनिर्धारितहरूमा अपग्रेड गर्नुहोस्।
- फिक्स बग डिबग कोड सक्षम छोडिएको थियो, फलस्वरूप सबै पाठ वाटरमार्क प्रविष्टि गरियो।
- GPS सम्मिलित ट्याग मेनूमा नयाँ हराइरहेको ट्यागहरू थपियो।
- निश्चित पाठ लेआउट मुद्दा।
- [जोडिएको] digit अंक परिशुद्धताका लागि जीपीएस ट्यागको दुई नयाँ संस्करण: अक्षांश 6, अक्षांश डिग्री एमएम एसएस Long, देशान्तर and र देशान्तर डिग्री एमएम एसएस।।
- [फिक्स्ड] जब एमआईपीटीसीम्बेडेड चयन गरिएको थियो र मेटाडाटा बचत नगरिकन यसले प्रोफाइलनाम, ओरिएन्टेशन, र रंग मोडेल बचत गर्दैन।
- [स्थिर] अवस्थित EXIF ​​र IPTC मेटा डेटा प्रतिलिपि गरिएको थिएन जब प्रतिलिपि मेटाडेटा चयन गरियो र तपाइँ IPTC सम्मिलित हुनुहुन्न।
- [अद्यावधिक] वर्तमान आईओएस र एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरूमा मद्दत मेनूमा लिंकहरू।
- TIFF बाट TIFF मा रूपान्तरण गर्दै कुनै अल्फा बिना अनावश्यक अल्फा च्यानल सिर्जना गर्दछ।
- IPTC डाटा ट्यागलाई समर्थन गर्दैन जस्तै .
- प्रभाव स्थिति प्रयोग गर्दा पाठ स्थिति परिवर्तन।
- ओएस एक्स १०.१10.13 वा पछिल्लो .heic फाइलहरू पढ्न आधारभूत समर्थन थपियो (पूर्वावलोकन पढ्न सक्ने केहि पनि काम गर्न सक्दछ)।
- फिक्स्ड बग: भेक्टर स्क्रोल बार शुरूमा स्क्रोल हुँदैन।
- QR कोड पछाडि पृष्ठभूमि रंग कोर्न QR कोड परिवर्तन गर्नुहोस्। यो परिवर्तन आईवाटरमार्कको विन्डोज v3.0.7 संस्करणसँग मेल खाने थियो।
- फिक्स्ड बग: पाठ वाटरमार्कमा पाठ प्याडिंगले काम गरिरहेको छैन।
- भेक्टर स्ट्रोक चौडाई सेट गर्नका लागि UI थपियो।
- फिक्स्ड बग: पाठ सम्पादक: अब पूर्वनिर्धारित द्वारा नयाँ लाइन को लागी कुञ्जी प्रविष्ट गर्नुहोस् र ट्याग सम्मिलित गर्दा सम्मिलित बिन्दु राख्नुहोस्।
- केहि पाठ सम्पादक यूआई लेआउट र हिज्जे मुद्दाहरू सहि गर्नुहोस्।
- ग्राफिक्सको लागि सीमा विवरणहरूको लागि यूआई थपियो। रेडियस र बोर्डर चौडाइ ग्राफिक्स वरिपरि सेट गर्दै।
- फिक्स्ड बग: नयाँ पूर्वनिर्धारित पाठ ब्यानर वाटरमार्कमा यदि पृष्ठभूमि जाँच गरिएन भने कसरी ब्यानर थोरै पारदर्शी सेतो छ? पूर्वनिर्धारित% 45% पारदर्शी सेतोमा।
- स्थिर हराएको ट्याग:
- आईटीटीसी मेटा डाटामा अन्य ट्यागहरू (एट्रिब्युटहरू, फाइल जानकारी, एक्सआईएफ, टीआईएफएफ, जियो, आदि) इम्बेड गर्न समर्थन थपियो। प्रतिलिपि अधिकार सूचनामा।
- विन्डोज संस्करणको साथ अधिक अनुकूलताको लागि निर्यात गर्दा कोड लिगेसी वाटरमार्क सफा गर्न जोडियो।
(विन्डोज संस्करणको विगत v1.02 वस्तुमा शीर्ष स्तर कुञ्जी समावेश गर्दछ
- हटाइएको "मोड" लेगेसी कुञ्जी
% S को रूपमा परिभाषित गरिएको छैन भने स्थान युनिट जोडियो।
- फिक्स्ड लिगेसी वाटरमार्कहरू पुन: निर्यात हुँदा अफसेट एक्स र अफसेट वाईजसँग पूर्णांक हुन्छ। केहि स्ट्रि asको रूपमा निर्यात गर्न प्रयोग गर्दछ।
- ठाडो पाठ प्याडि / / ठाडो ब्यानरहरूको साथ कर्निंग मुद्दा।
- .२ Op अस्पष्टताका साथ ब्यानरको लागि ब्यानटको लागि पूर्वनिर्धारित पृष्ठभूमि र color परिवर्तन गरियो।
प्याडिding सहित ग्राफिक्स लेआउट
- फिक्स्ड आर्क पाठ एम्बोस गरिएको, कुँदिएका विकल्पहरू।
- प्याडि and र फ्रेम्सको साथ पाठको निश्चित रूपरेखा।
ड्र (शिफ्ट- CMD-M) देखाउन / लुकाउन नयाँ विन्डोज आईटम "वाटरमार्क प्रबन्धक" थपियो।
- फ्रेम र प्याडि slको प्रत्येक परिवर्तनलाई अनुमति दिन बोर्डर फ्लोटिंग विन्डोजमा प्याडिंग डब्ल्यू स्लाइडर थपियो।
- नयाँ ट्याग थपियो , विन्डोज संस्करण .3.0.7.०.। मिलाउन
- NIFE को सट्टा LZW कम्प्रेसन प्रयोग गर्न TIFF आउटपुट परिवर्तन गर्नुहोस्। यो ठूलो TIFF छविहरूलाई अनुमति दिन TIFF ढाँचाको लागि workaround 2GB सीमा हो।
नोट: पुरानो व्यवहारको लागि QR कोड पछाडि सेतो जोड्न विकल्प थप्न UI परिवर्तन गरियो।
- बग फिक्स: QRCode, हस्ताक्षर बिटम्याप ग्राफिक लोडको साथ सम्पादक रिलीज गरिएको थिएन त्यसैले अर्को सम्पादकले प्रेत ग्राफिक थियो।
- बग फिक्स: एम्बोस गरिएको र ईन्ग्रेभ्ड अब पाठ वाटरमार्कको साथ फेरि काम गर्दैछन्।
- बग फिक्स: छवि डिस्क मार्गबाट ​​लोड भइरहेको थिएन। कुनै छविको नतीजा।
- बग फिक्स: साथ StegoMark ट्याग कार्य गरिरहेको छैन। कुनै प्रतिस्थापनको साथ वर्ष सिर्जना गरियो। पाठ वाटरमार्क ट्याग जस्तै।
* व्यवहार परिवर्तन भयो कृपया तपाईंको QR कोड वाटरमार्कहरू समीक्षा गर्नुहोस्: "सेतो पारदर्शी बनाउनुहोस्" यदि असफल भयो भने, मूल छवि प्रयोग गरिएको छ, कुनै छविको साटो।
* QR कोडलाई म्याकोस १०.10.9 वा पछिल्लो आवश्यक पर्दछ।
* प्रतिक्रिया परिवर्तन भयो जब आउटपुट ढाँचा स्टिगोमार्कको लागि जेपीजी हुँदैन:
"त्रुटि खराब आउटपुट प्रकार, आउटपुट फाइल प्रकार JPEG मा स्टेगोमार्कको साथ प्रक्रियामा परिवर्तन गर्नुहोस्।" र "बीप" खेल्नुहोस्;
* विशेष क्यारेक्टरहरू गैर- ASCII Stegomark मा समर्थित छैन।
(रूपान्तरण गर्न कोड थपियो: © ™ र • मा: (c), TM, र *)।
* मुद्दा: ठाडो ब्यानरले पाठ बेर्ने छैन यदि कुनै समाधान गरेन। क्षैतिज लपेट्नेछ। वर्कअराउन्ड: म्यानुअली नयाँ लाइन प्रविष्ट गर्नुहोस्।
यो iWatermark प्रो 2.0 को पहिलो प्रमुख रिलीज हो। यो १.० देखि २.० सम्मका सबै महत्त्वपूर्ण सुविधाहरूको सूची हो
- GPS (Alt। Speet र Lat।) र हालको (मिति, समय, वर्ष, कुल) र फाइल एट्रिब्यूटहरूका लागि iWatermark टेक्स्ट एडिटरमा अपडेट गरिएको ट्यागहरू।
- पाठ, ग्राफिक र भेक्टर वाटरमार्कमा घुमाउने र स्केलि ge गेस्चरहरू सक्षम गरियो। र स्मार्ट जुम स्केलिंग खोल्ने / बन्द गर्नका लागि।
- इनपुट पूर्वावलोकनमा पूर्वावलोकन क्लिक स्मार्ट जुमलाई सक्षम पारिएको। ie बल क्लिक र haptic प्रतिक्रिया।
- वाटरमार्क प्रबन्धक आईसीओएन स्तम्भको क्रमबद्ध क्रम।
- काउन्टर पुन: नामाकरण ट्याबमा सँधै सक्षम गरियो, किनकि यसले डेटा डाटा ट्यागमा पनि प्रयोग गर्‍यो।
- स्थिर पाठ सम्पादक मेनू सम्मिलित ट्याग हराइरहेको थियो
- सिर्जना महिना, सिर्जना दिन र महिना ## र दिन ## को लागी ट्याग जोडियो।
फोटो को निर्माण मिति को लागी:
अनुमति दिनु ..पाठ ट्यागमा २०१.2017.03.10.०XNUMX.१० उत्पादन गर्न।
- एम्बोस / कुँदिएको पाठ थपियो
- धेरै UI परिवर्तन
- नयाँ वाटरमार्क संस्करण १.०, लाइन्स, बोर्डर, टेक्स्ट अन आर्क र टेक्स्ट ब्यानर पछि थपियो
- फिक्स्ड टेक्स्ट एडिटर बैकग्राउंड र color्ग पनि ड्रपशेडो स्विच अफ।
- वाटरमार्क कुञ्जी पृष्ठभूमि जोडीयो अनफ - ट्रिप गर्न बुलियन यदि अल्फा शून्य छ (बन्द)।
- काउन्टर पुन: नामाकरण ट्याबमा सँधै सक्षम गरियो, किनकि यो मेटा डाटा ट्यागमा पनि प्रयोग गरीन्छ।
- digit अंक GPS को लागी ट्याग जोडियो ',' 'digit अंकको सटीकता दिनुहोस्।
- GPS (Alt। Speet र Lat।) र हालको (मिति, समय, वर्ष, कुल) र फाइल एट्रिब्यूटहरूका लागि iWatermark पाठ सम्पादकमा अपडेट गरिएको ट्यागहरू।
- पाठ, ग्राफिक र भेक्टर वाटरमार्कमा घुमाउने र स्केलि। गेस्चरहरू सक्षम गरियो। र स्मार्ट जूम ट्युरिंग स्केलि on अन / अफको लागि।
- सम्पादक: प्रदर्शन: द्रुत redrawing को लागी संपादक मा स्रोत छवि को क्याच सक्षम। अधिक ध्यान जब स्रोत ठूलो RAW छवि हो।
- अनुकूलित र बगहरू स्थिर
- अद्यावधिक म्यानुअल।
- वाटरमार्क सम्पादन विन्डो अब सामने रहनुहोस्।
- निश्चित पाठ र color पूर्वनिर्धारित वाटरमार्क सम्पादकमा कालो।
- स्थिर एम्बोस / कुँदिएको पाठ (V2.00fc3 मा accendently अक्षम)।
- सक्षम गरिएको आर्क टेक्स्ट र ब्यानर वाटरमार्क एम्बॉस / कुँदिएको पाठ बगहरू / यूआई मुद्दाहरू एम्बोस र एन्ग्रेभिडको साथ:
----- उत्कीर्ण पृष्ठभूमि र एम्बोस गरिएको पृष्ठभूमि
----- पाठ र colorको कुनै प्रभाव हुँदैन लुकेको वा असक्षम हुनुपर्दछ।
----- यो क्लियर (जस्तै अल्फा = ०.०) मा सेट गर्नुपर्नेछ।
----- पृष्ठभूमि र all्ग सबै ईra्ग्रेभ र एम्बोसको लागि बन्द गर्नुपर्दछ
----- पृष्ठभूमि ठोस हुन सक्दैन वा पाठ देख्न सक्दैन।
----- दोहोरिएको वाटरमार्कमा एम्बोस / एra्गेभरेटेड टेक्स्ट र आर्क टेक्स्ट वाटरमार्क समर्थित छैन।
- अधिक ui परिवर्तन
- नयाँ वाटरमार्क
- अपडेट गरिएको ui
- धेरै परिवर्तन र धेरै फिक्सहरू।
- नयाँ म्यानुअल।
- हामी सबै नोटहरू स collecting्कलन गर्दैछौं र अधिक विवरणहरू यहाँ पोष्ट गर्नेछौं।
- कृपया यो प्रमुख अपडेटमा तपाईंको प्रतिक्रिया दिनुहोस्।
महत्वपूर्ण: एप्पलले सुरक्षामा गरेको परिवर्तनका कारण यो संस्करण र भविष्यका संस्करणहरू म्यानुअल रूपमा डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। https://plumamasing.com/bin/iwatermarkpro/iwatermarkpro.zip 'अपडेटहरू जाँच गर्नुहोस्' अब बिभिन्न किसिमले काम गर्दछ। अद्यावधिकहरू म्यानुअली डाउनलोड गर्नुहोस्, पुरानो संस्करण मेटाउनुहोस् र नयाँ संस्करण अनुप्रयोग फोल्डरमा राख्नुहोस्।
- सम्पादकमा "लेन" मेटा डेटा (लेन जानकारी, लेन मोडेल, लेन आईडी) सम्मिलित फिक्स गरियो। यसको सट्टा लेन मोडेल घुसाइरहेको थियो
- प्रयोगकर्ताले सबै इनपुट वस्तुहरू हटाउँदा पूर्वावलोकन सिंक गर्न UI अपडेट गरियो
- वाटरमार्क म्याजेमेन्ट ड्रयरमा तस्वीर स्विच गर्दा पूर्वावलोकन सिंक गर्नुहोस्।
- "नमूना पूर्वावलोकन छवि" प्रयोग गर्दा शब्द अद्यावधिक गरियो।
१०.10.7 मा स्थिर क्र्यास जब सेपिया वा ग्रेस्केल आउटपुट सक्षम गर्नुहोस्। यो १०...x सम्म स्वत: सुधार विकल्पहरू उपलब्ध नभएको कारणले हो। तिनीहरू सेटअप थिए जब सेपिया र ग्रेस्केल चयनित थिए। तिनीहरू अब १०.10.8.x मा लुकेका छन्।
- हटाइएको स्पार्कल फ्रेमवर्क (एप्पलद्वारा स्यान्डबक्स परिवर्तनको कारण हाल प्रयोग नगरिएको)
पूर्व बारे जान्नको लागि अपडेट गरिएको संस्करण जाँच
- १ पिक्सेल बन्द मुद्दा दाँया हात वा माथी प al्क्तिबद्ध गर्दै।
- लेआउट मुद्दाहरूको लागि केही लग सन्देश र सुधारिएको लगइन सफा गर्नुहोस्।
- स्यान्डबक्स मुद्दाहरूको वरिपरि कार्य गर्न zip डाउनलोड गर्न अपडेट विकल्पहरू परिवर्तन गरियो।
- OSN 10.7 वा पछि PhotNotary को लागि आवश्यक छ। त्यसो भए, १०..10.6 मा फोटो नोटरीले असक्षम भन्दछ।
- समर्थन १०.,, १०.10.7, १०. and र १०.१० को साथमा स्थिर हस्ताक्षर मुद्दा।
- PS2png संसाधन फोल्डर बाहिर सार्नुहोस्, एप्पल द्वारा सुझाव दिए जस्तै।
- माइनर कोड सफाई
महत्वपूर्ण: एप्पलले सुरक्षामा गरेको परिवर्तनका कारण यो संस्करण र भविष्यका संस्करणहरू म्यानुअल रूपमा डाउनलोड गर्न आवश्यक छ। https://plumamasing.com/bin/iwatermarkpro/iwatermarkpro.zip सामान्य 'अपडेटहरूको लागि जाँच गर्नुहोस्' अब उस्तै तरिकाले काम गर्दैन। अपडेटहरू प्रत्येक नयाँ संस्करणको लागि म्यानुअल रूपमा डाउनलोड गर्न आवश्यक पर्दछ।
- स्यान्डबक्स मुद्दाहरूको वरिपरि काम गर्न zip डाउनलोड गर्न अपडेट विकल्पहरू परिवर्तन गर्नुहोस्।
- केहि एप्पल लेगसी कोडमा ठूला फोल्डर रूखहरूमा डेडलक समस्या ठीक गर्न इनपुट फोल्डरको स्क्यानिंग परिवर्तन भयो। १०.१०.२ अपडेटसँग सम्बन्धित देखिन्छ।
- iPhoto र एपर्चर प्लगइनहरू डाउनलोड र स्थापना गर्न विकल्पमा निर्मित हटाइयो, तिनीहरू एप्पलको फोटो अनुप्रयोगमा प्रयोग गर्न योग्य छैनन् जुन OS X १०.०.10.10.3. in मा अप्रिलमा उपलब्ध छ। एप्पलको फोटो अनुप्रयोग आईफोटो र एपर्चर प्रतिस्थापन गर्दछ। डाउनलोड गर्न योग्य स्थापनाकर्ता लि link्क म्यानुअलबाट यसको प्रयोग गर्न चाहनेहरूको लागि उपलब्ध हुनेछ। यस बारे थप विवरण म्यानुअल मा छ।
- स्थिर मुद्दा फोटो नोटरी शो गैर हो
"मेरो एल्बम" मा वाटरमार्क फोल्डर।
- सजिलो पहुँचको लागि आईवटरमार्क स्क्रिप्ट फोल्डरमा चित्रहरू फोल्डरमा लिंक सिर्जना गर्न निश्चित कोड।
- स्क्रिप्ट फोल्डरमा व्यक्ति चित्र फोल्डरबाट लिंक सिर्जना गर्दा त्रुटि लग गर्न अपडेट गरिएको स्क्रिप्ट मेनू
- स्क्रिप्ट फोल्डर "com.plumamasing.iwatermarkpro" मा नयाँ सेटिंग्स बचत गरेपछि अपडेट गर्न स्क्रिप्ट मेनू अपडेट गरियो।
- एप्पलस्क्रिप्टको रूपमा बचत सेटिंग फिक्स गरियो, त्यसैले इनपुट फोल्डर सेट गरिएको छैन, यो टिप्पणी गरिएको छ त्यसैले स्क्रिप्ट चल्छ।
- "स्टार्टअपमा" रिसेट इनपुटको लागि पूर्वनिर्धारित परिवर्तन भयो, स्टार्टअपमा खाली छैन (चयनित फोल्डर पुन: स्क्यान गर्नुहोस्),
१०.१०.२ मा लग फाइल प्रविष्टिहरूको कारणले केही लिगेसी कोड हटाउनुहोस्।
१०.10.9.5..10.10 र १०.१०.x को लागि नयाँ सुरक्षा आवश्यकताको कारण ड्रपलेट सिर्जना हटाइयो
- नयाँ पुन: नाम विकल्प थपियो। सेट सुरू गर्दै काउन्टर मान। डिफल्ट १ हो।
- अन्त प्रयोगकर्ता कामको प्रवाहका लागि नयाँ नमूना लिपिहरू (म्यानुअलबाट लिंकहरू हेर्नुहोस्)।
- आउटपुट फाईलहरूको लागि आवेदन दिन शार्पनिंग विकल्पहरू जोडियो।
- आउटपुट फाइलहरूको लागि आवेदन दिनका लागि स्वत: सुधार विकल्प थपियो। (वर्तमानमा कुनै पनि = सबै सक्रिय वा बन्द)
- अर्को रिलीजमा ठीक हुनेछ)।
- उपमा आउटपुट संस्करणहरूको लागि सेपिया र BW / ग्रे स्केल थपियो
-फोल्डर क्रमशः सेपिया र BW भनिन्छ
- आउटपुट ढाँचा र आउटपुट संवर्द्धनका लागि ढाँचा ट्याब थपियो
- UI परिवर्तन: नयाँ पुनःनामाकरण विकल्प थपियो। सेट सुरू गर्दै काउन्टर मान। डिफल्ट १ हो।
- UI परिवर्तन: मेटाडाटा पृष्ठ पुनःनामाकरण पृष्ठबाट "सिर्जना मिति प्रतिलिपि गर्नुहोस्"।
- UI परिवर्तन: नाम परिवर्तन ट्याबबाट ढाँचा ट्याबमा फाइल ढाँचा सारियो
- UI परिवर्तन: मुख्य ट्याब, आउटपुट ट्याबमा फोल्डर संरचना सारियो
[फिक्स्ड] V1.54r2 मा अतिरिक्त लग सन्देशहरू हटाइयो। DrawTXT: पुरानो [फिक्स्ड] जब तपाइँ प्रशोधन शुरू गर्नुहुन्छ, पूरा हुने सन्देश हटाउँदछ। ie "प्रक्रिया समाप्त भयो"। [Mod] परिष्कृत: डेमो
- रूपरेखा खैरो वाटरमार्क me.wmk4
- पाठलाई तल १% द्वारा अफसेट गर्नुहोस् र अन्तमा ठाउँ थप्नुहोस् [फिक्स्ड] OS X १०..1. with को साथ पाठ वाटरमार्क ड्रइंग नगर्नुहोस्। [फिक्स्ड] ब्लेन्ड मोडहरूको लागि पूर्वावलोकन [Mod] जब हाम्रो अनुप्रयोग स्क्रिप्टहरू अवस्थित हुँदैन। "~ / पुस्तकालय / अनुप्रयोग स्क्रिप्टहरू / com.plumamasing.iwatermarkpro" अवस्थित छैन र हामी यसलाई सिर्जना गर्न सक्दैनौं अब हामी प्यारेन्ट फोल्डर देखाउँदछौं: "अनुप्रयोग स्क्रिप्टहरू" र प्रयोगकर्तालाई स्वचालित रूपमा फोल्डर सिर्जना गर्न सचेत गर्दछ: "com.plumamasing.iwatermarkpro" [ Mod] द्रुतलुक संस्करण # v10.6.8 बाट V1.51 मा (हामी यसलाई अपडेट गर्न बिर्स्यौं)।
[सुधारिएको] UI वाटरमार्क प्रबन्धक १ मा परिवर्तन। अब, शीर्षमा खोजी गर्नुहोस्, २. नाम बदल्ने क्षेत्र थपियो, default. पूर्वनिर्धारित परिमार्जन लामो मितिबाट छोटो मिति हो। Water. सम्पादन गर्न वाटरमार्कमा डबल क्लिक गर्नुहोस्। पुनःनामाकरण अनुमति दिन डबल क्लिक गर्नुहोस्।
[फिक्स्ड] सम्पादकले अब बचत गर्नु अघि हालको सम्पादनहरू कमिट गर्दछ।
[फिक्स्ड] वस्तु विवरण सुधार गरियो। अब रिपोर्ट # वस्तुको केही पनि मेटिएको छैन र चयनित आईटमको पाठ प्रदर्शन गर्दछ
[जोडिएको] २ new नयाँ डेमो वाटरमार्क अनुप्रयोगको पूर्वनिर्धारित कन्फिगरेसनमा थपियो। तिनीहरू विभिन्न सुविधाहरू प्रदर्शन गर्छन्। यी सबै पहिलो पटक प्रयोगकर्ताहरूका लागि लोड हुन्छन्। अघिल्लो प्रयोगकर्ताहरूलाई या त उनीहरू लोड गर्नका लागि: १. उन्नत ट्याबमा रिसेट पूर्वनिर्धारित छनौट गर्नुहोस् वा २ वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्नुहोस्: https://plumamasing.com/bin/iwatermarkpro/Defaultwatermark.zip यी वाटरमार्क्सले कसरी मेटाडाटालाई वाटरमार्कको रूपमा प्रयोग गर्ने, ग्राफिकको प्रयोग प्रदर्शन गर्दछ। विकल्पहरू, स्केल र स्थान उपकरणहरूको प्रयोग गरेर, ठेगाना किताब डाटाको प्रयोग, विशेष प्रभावहरू, आदि।
[फिक्स्ड] क्रिएटिव कमन्स वेबसाइट पुनर्स्थापना गर्दा जब अनुप्रयोगहरू सल्दछन्।
[सुधारिएको] साना उपयोगको सुधार गर्नका लागि विभिन्न साना UI परिवर्तनहरू।
[सुधारिएको] वाटरमार्क प्रबन्धक यूआई। वाटरमार्कले IPTC / XMP जानकारी इम्बेड गरेको बेला देखाउनको लागि IPTC / XMP क्षेत्र २ बनायो। एम्बेडिding गियर मेनूबाट वाटरमार्क म्यानेजरको तल गरिन्छ। मेनू आईटमको प्रयोग गर्नुहोस् 'सम्मिलित आईपीटीसी / एक्सएमपी चयनित वाटरमार्कमा'। त्यसो भए, अब वाटरमार्कले देख्न सक्ने वॉटरमार्क थप्न सक्छ र साथसाथै प्रत्येक फोटोमा IPTC / XMP मेटाडेटा थप्न सक्छ।
1.51 संस्करण परिवर्तन
[जोडीएको] iWatermark अब एप्स्क्रिप्ट योग्य छ। स्क्रिप्ट्स मेनू थपिएको छ। यसले पूर्ण कार्यप्रवाहहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। एप्पलस्क्रिप्ट मार्फत सबै सेटि settingsहरू र केहि अन्य उपयोगी सुविधाहरूको लागि पूर्ण पहुँच: * वाटरमार्कहरूको सूची, चयनित वाटरमार्क (आरडब्ल्यू) * छवि फेला पर्‍यो * हालको छविको अनुक्रमणिका (आरडब्ल्यू) * छविहरूको पथहरूको सूची फेला पर्‍यो। * हालको प्रक्रिया स्थिति (r) * प्रोसेसिंग सुरु गर्न आदेश, इनपुट फोल्डर पुन: स्क्यान गर्नुहोस्।
[परिवर्तित] स्थिर रोटेशन र मापन इशारा समर्थन।
[जोडिएको] Sandboxing सक्षम।
[जोडिएको] अनुप्रयोग भर्खरको XCode को साथ हस्ताक्षर गरी कम्पाइल गरियो। कोड अनुकूलित गरियो।
[जोडिएको] म्याकबाट निर्यात गरिएको वाटरमार्कहरू अब विन्डोजमा काम गर्दछ र यसको विपरित।
[जोडिएको] ओएस एक्स १०. preview पूर्वावलोकनका लागि साझेदारी विकल्पहरू - एयरड्रप, फ्लिकर, ट्विटर, फेसबुक, आदि।
[जोडिएको] संगतताका लागि आईओएस वाटरमार्क आईओएस फन्टहरूको लागि पहुँच। उन्नतमा खोल्नुहोस्: साझेदारी ट्याब।
[जोडिएको] नयाँ नमूना ग्राफिक्स (सेतो संग्रह) र (कालो स Collection्ग्रह)।
[परिवर्तित] थम्बनेल जेनेरेटरले अब मूल निर्देशिका संरचना सिर्जना गर्दछ (जस्तै। फोल्डर संरचना सेटिंग्सलाई सम्मान गर्दछ)।
[परिवर्तित] अफसेटको सीमित -२25% छविमा वाटरमार्कलाई छवि बाहिर आंशिक रूपमा राख्न अनुमति दिन।
[अद्यावधिक] V1 एपीआईमा ड्रपबक्स, र सबै कनेक्शन ईन्क्रिप्टेड जडानहरू प्रयोग गर्नुहोस् (https: //)।
[अद्यावधिक] वाटरमार्कको लागि द्रुतलुक प्लगइन अपडेट र सुधारियो।
[सफाई] ग्राफिक्स लाइब्रेरी फोल्डर पुन: नामाकरण र संगठित। नमूनाहरू "कलाकृति पुस्तकालय" मा परिवर्तन गरियो र नयाँ ग्राफिक्स थप्नुहोस्।
[UI अपडेट] सम्पादक, पाठ पुस्तक मेनू परिवर्तन गरिएको ठेगाना पुस्तिका विकल्पहरू समावेश गर्न।
[UI अद्यावधिक] सम्पादकमा सम्पादक पूर्वावलोकनको लागि हालको वाटरमार्कको बचत आवश्यक पर्दैन।
[जोडिएको] मेनू दृश्यमा थपिएका सबै वाटरमार्क वस्तुहरू चयन गर्नुहोस्।
[फिक्स्ड] "वस्तु ह्यान्डलहरू देखाउनुहोस्" परिवर्तन पछि अब ताजा गर्दै।
[फिक्स्ड] एपर्चर सम्पादक - फिक्सहरू।
[थपिएको] ".iwmkMetaSet" कस्टम फाइल एक्सटेन्सनमा बचत बचत र डबल क्लिक गर्दा आईप्टिक / एक्सएमपी मेटा डाटा लोड हुनेछ।
[जोडिएको] वाटरमार्क फाइलमा (.wmk) क्रस प्लेटफर्म समर्थनका लागि समर्थन "rtf" र "html" पाठ वाटरमार्कको संस्करण समावेश गर्न निर्यात गरियो।
[परिवर्तित] पारदर्शी png वा PSD छविहरूलाई अनुमति दिन रेखाचित्र परिवर्तन गर्नुहोस्।
[जोडिएको] रिसाइज विकल्पहरू (फिट बाकस (उदाहरणका लागि चौडाई र उचाइ दुबै), फिट उचाई, चौडाई फिट)
[जोडिएको] पुनःआकार गर्नका लागि हालको आकारको समर्थन% थपियो।
[परिवर्तन गरिएको] प्रिसेट मेनूलाई "अन्य" मा पुनः आकार दिनुहोस् जब प्रयोगकर्ता% मा परिवर्तन हुन्छ वा चौडाई उचाईमा सम्पादन गर्दछ।
[जोडिएको] टेक जानकारीको साथ वाटरमार्क प्रबन्धकमा पूर्वावलोकन सिर्जना गर्नुहोस्।
[जोडिएको] स्थान संवाद वस्तुहरूको लागि सजावट लाइनहरू थपियो।
[जोडिएको] साझेदारी - ड्रपबक्समा तपाईंको वाटरमार्क फोल्डरमा लिंक साझेदारी गर्न सजिलो भयो।
[जोडिएको] म्याकोन्टस कम्प्युटरमा १०.10.7 वा १०. running चल्दै गरेको वाटरमार्कहरू साझेदारी गर्न एयर ड्रप समर्थन। १०.10.8 पठाउन आवश्यक पर्दछ, १०.10.8 वा पछि फेन्डरमा प्राप्त गर्न, त्यसपछि iWatermark मा आयात गर्नुहोस्।
[जोडिएको] आदेश पी र सिफ्ट-कमांड-स्पेसबार मार्फत पूर्वावलोकन विन्डु टगल गर्नुहोस्।
[जोडिएको] प्रगतिशील JPG चेक बक्स विकल्प ट्याबमा JPEG विकल्पहरू छन्। उन्नत ट्याबबाट हटाईयो।
[जोडिएको] वाटरमार्कमा आईपीटीसी / एक्सएमपी एम्बेड गर्न वाटरमार्क प्रबन्धकमा विकल्प थपियो
[थपिएको] वाटरमार्क प्रबन्धक मार्फत सक्षम पठाउँदै -> सेयर मेनू (एयर ड्रप, ईमेल, मेसेन्जेस (आईच्याट), ड्रपबक्स)।
[परिवर्तित] अब Dropbox लगइन स्थितिमा आधारित अक्षम / सक्षम मेनू।
[परिवर्तित] टेम्पलेट मेनूलाई रिसाइज गर्नुहोस् (शीर्षक, आईओएस, मोनिटरहरू, क्यामेरा आदि द्वारा सेटअप)।
[थपिएको] धेरै साना अप्टिमाइजेसन, फिक्स र यूआई यहाँ कागजातको लागि धेरै परिवर्तन भयो।
आईवटरमार्क प्रो म्यानुअल
म्यानुअल पनि मद्दत मेनू मा पाउन सकिन्छ वा? प्रत्येक अनुप्रयोग भित्र आईकनहरू।
म्याक र विन्डोज को लागी iWatermark को पछिल्लो संस्करणहरु
डाउनलोड लिंक र प्रणाली आवश्यकताहरूको साथ
ओएस र जानकारी लिंक
म्याक पुरानो संस्करण
iWatermark प्रो १.2.56२
iWatermark प्रो १.1.72२
iWatermark प्रो १.1.20२
इन्टेल म्याक ओएस एक्स 10.8-10.14
इन्टेल म्याक ओएस एक्स 10.6-10.11
पीपीसी / इंटेल म्याक OX १०..10.5
म्याक १०..10.4, १०..10.5 वा १०।
विन्डोज पुरानो संस्करण iWatermark 3.1.6.२
iWatermark 2.0.6.२ WIN XP वा उच्च
म्याक, आईओएस, विन र एन्ड्रोइडका लागि iWatermark को नयाँ संस्करणहरू
प्रत्येक संस्करणको लागि लिंकहरू, जानकारी, ओएस, डाउनलोड र म्यानुअल
नाम र अधिक जानकारी
आईओएस iWatermark +
म्याक आईवटरमार्क म्याक 10.9-12.0+ डाउनलोड 2.6.3 लिङ्क
Windows iWatermark प्रो
iWatermark प्रो १.2२ २, or वा
64 बिट, 10, 11 डाउनलोड
एक OS को कति संस्करणहरू सामान्यतया प्रत्येक अनुप्रयोगको लागि समर्थित छन्?
मुख्य अपडेटहरूले सँधै म्याक, विन्डोज, आईओएस र एन्ड्रोइडमा कम से कम हालको र अघिल्लो OS संस्करणहरू समर्थन गर्दछ।
हामी प्रत्येक OS का पुरानो संस्करणहरूको लागि समर्थन प्रदान गर्न सक्षम हुन चाहन्छौं तर यो सधैं सम्भव हुँदैन र केही केसहरूमा हामीलाई अपरेटि। प्रणालीमा भर्खरको सुधारहरूको फाइदा लिन सक्षम हुनबाट रोक्न सक्छ।
हामी विभिन्न सफ्टवेयरको अधिक पुरानो संस्करणहरूको लागि हाम्रो सफ्टवेयरको पुरानो संस्करणहरू प्रदान गर्न र प्रदान गर्न जारी राख्छौं। म्याक र विन्डोजमा पुरानो संस्करणहरूको लागि यहाँ ट्याप गर्नुहोस्
स्कट बाल्डविन - स्कट्टलबड्विनफोटोग्राफी.कॉम
"मलाई लाग्छ कि तपाइँको उत्पादनको बारे मलाई मनपर्दछ कि वाटरमार्कको प्लेसमेन्ट तस्विर पक्षको प्रतिशतमा आधारित छ, पिक्सेलको विशेष संख्यामा होइन। किन त्यस्तो महत्त्वेपूर्ण छ? म २ 24.5..12 एमपीको क्यामेरा र धेरै १२ एमपीको क्यामेराको साथ शूट गर्छु। यदि म मेरो उत्पादनको चित्रको तल नजिकै अरू उत्पादनहरू चाहान्छु मैले उनीहरूलाई कति पिक्सेलहरू बताउनु पर्छ। यदि मैले २.24.5.MPMP चित्रको साथ काम गरें भने पिक्सेलको स I्ख्या म चाहान्छु तस्विरको तस्विर तुलनामा फरक हुनेछ। १२ एमपीको चित्रमा। तपाईको अनुप्रयोगले आकारको% को प्रयोग गर्दछ। म तपाईलाई दुई धेरै फरक आकारका तस्वीरहरुमा चलाउन सक्छु र लोगोको प्लेसमेन्ट सँधै समान हुनेछ। मलाई लाग्छ कि यो राम्रो बिक्री बिन्दु हो। "
Diane एडमंड्स - - YourWavePics.com
"एक प्रो सर्फ फोटोग्राफर को रूपमा मेरो फोटोहरु प्रकाशित गर्न को लागी प्रयास गर्न को रूप मा, iWatermark सबै भन्दा राम्रो been 20 म खर्च गरेको छ! सबैजना तपाईलाई तिनीहरु लाई फोटो ईमेल गर्न चाहान्छन् तर यो ठाडो र क्षैतिज समायोजित गर्न मैन्युअल्ली वाटरमार्क थप्न धेरै समय लाग्यो। ढाँचाहरू। मैले फोटोशप एलिमेन्ट्स ब्याच प्रोसेसिंग प्रयोग गर्ने प्रयास गरें। PS5 मा गर्न यो धेरै नै जटिल छ। यस कार्यक्रमले फोटोहरूको फोल्डरलाई तुरुन्तै वाटरमार्क गर्न र बिभिन्न प्रकाशकहरूलाई पठाउन मलाई धेरै समय बचत गरेको छ। "
पिटर Kearns- www.pfphotography.co.uk
क्रिस- एक्शन डिजिटल फोटोग्राफी
"म अब केही समयको लागि iWatermark प्रयोग गर्दै छु र यो मनपर्दछ। गत वर्ष मैले मेरो बिक्रीको धेरै हिस्सा गुमाएँ, परिवारहरूले मेरो साइटबाट वालेट आकारका तस्वीरहरू डाउनलोड गर्दा। यस वर्ष म iWatermark प्रयोग गर्दै छु र मेरो बिक्री माथि छ। व्यक्तिहरू चित्रको मध्य भागमा प्रतिलिपि अधिकार जानकारी हेर्न चाहँदैनन्। यो एक महान उत्पादन, महान मूल्य र सबै प्रयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो छ। मेरो उत्पादन रक्षा गर्न मद्दत गर्नुभएकोमा धन्यवाद! शान्ति। "
जोन राइटJ&K Creative! - http://www.artbyjon.com
"तपाइँको कार्यक्रम मलाई मात्र एक भयानक मद्दत भएको छ। म नियमित रूपमा मेरो विवाह, घटना र पोर्ट्रेट फोटोग्राफी ইভেন্টपिक्स डॉट कॉममा राख्छु। यसले हाम्रो कामको अनधिकृत प्रयोग रोक्न मद्दत गरेको छ र म पक्का छु कि यसको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। हामी एक ठूलो कार्यक्रम को लागी खुसी थिए। "
स्टीव@ साउथपाउ स्टीव
"म भाडाका लागि घरहरू क्र्यागलिस्टमा सूचीबद्ध गर्दछु र मेरा केही चित्रहरू हाईज्याक हुनुभन्दा पहिले मैले iWatermark खरीद गरेको थिएँ। अब जालसाजीहरूले अर्को लक्ष छन जुन मेरो वेब साइट चित्रमा प्लास्टर गरिएको छ!"
रोक्नको लागि स्लाइडशोमा माउस कर्सर राख्नुहोस्।
म्याक Informer समीक्षा 6/3/2021
सर्वश्रेष्ठ फोटो वाटरमार्किंग सफ्टवेयर २०२०
२०२० मा शीर्ष १० सर्वश्रेष्ठ फोटो वाटरमार्किंग सफ्टवेयर।
- लिजा ब्राउन, फिल्मोरा १/१//२०२० द्वारा समीक्षा
विन्डोज को लागी iWatermark प्रो को समीक्षा
- Tarekma 12/9/2019
२०१ for को लागि सर्वश्रेष्ठ वाटरमार्किंग सफ्टवेयर
"IWatermark प्रो अहिले सम्ममा मैले समीक्षा गरेको सबैभन्दा फिचर-प्याक वाटरमार्किंग सफ्टवेयर हो, र यससँग धेरै सुविधाहरू छन् जुन मैले अरू कुनै कार्यक्रममा फेला पारेन। आधारभूत पाठ र छवि वाटरमार्कहरू ह्यान्डल गर्ने क्षमता बाहेक, त्यहाँ क्युआर कोड वाटरमार्कहरू र स्टेगनोग्राफिक वाटरमार्कहरू जस्ता अन्य धेरै अतिरिक्तहरू छन्, जसले छवि चोरहरूलाई केवल काटछाँट गर्न वा तपाईंको वाटरमार्कलाई कभर गर्नबाट रोक्नको लागि सादा दृश्यमा डाटा लुकाउँछ। तपाईं ड्रपबक्स खातासँग एकीकृत गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको आउटपुट वाटरमार्क छविहरू बचत गर्नको लागि, जुन ग्राहकहरूको साथ द्रुत र स्वचालित साझेदारीको लागि धेरै उपयोगी छ। ”
- थोमा बोल्ड, सफ्टवेयरह
फोटोहरू पाए? तपाईंको प्रतिलिपि अधिकार दावी गर्न प्रत्येकमा वाटरमार्क राख्नुहोस्
- जेफ्री Mincer, बोहेमियन बुमेर
IWatermark प्रो को SMMUG समीक्षा
- L. डेभनपोर्ट
IWatermark प्रो को लागी स्विडेनी भाषा मा धेरै गहन समीक्षा। - हेनिंग वर्स्ट सम्पूर्ण लेख पढ्नुहोस्
क्रिस Dudar, ATPM
जे नेल्सन, म्याकवर्ल्ड
Of. of चूहों को।
"आईवाटार्मार्कको सुन्दरता यसको प्रयोग र कार्यक्षमता को सजिलो संयोजन हो। यदि तपाईं कहिल्यै वाटरमार्किंग प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ, वा यदि तपाईंले पहिले नै यो गरिरहनु भएको छ र तपाईं यसलाई छिटो र सजिलो तरिकाले गर्न चाहानुहुन्छ भने, iWatermark सस्तो र प्रभावशाली उपयोगिता हो। स्क्रिप्ट सफ्टवेयरको iWatermark भन्दा राम्रो समाधान मैले अझै देखेको छु। ”
- डेन फ्रेक्स, म्याकवर्ल्ड
- डेनियल एम। ईस्ट, म्याक डिजाइन म्यागजिन, रेटिंग:
- डेव जोसन, पीसी वर्ल्ड
सम्पूर्ण लेख पढ्नुहोस्म्याक्सिमम समाचार समीक्षाले यसलाई १० मध्ये9प्रदान गर्‍यो।
पीसी विश्व समीक्षा
“तपाईको प्रोग्रामले मलाई ठूलो सहयोग गर्यो। म नियमित रूपमा मेरो विवाह, घटना र पोट्रेट फोटोग्राफी राख्छु eventpix.com। यसले हाम्रो कामको अनधिकृत प्रयोग रोक्न मद्दत गरेको छ र म पक्का छु कि यसको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। हामी एक ठूलो कार्यक्रम को लागी खुसी थिए। "
"म भाडाका लागि क्राइगलिस्टमा घरहरूको सूची दिन्छु र iPatermark किन्नु भन्दा पहिले मेरो फोटोहरू हाईज्याक भयो। अब जालसाजीहरूले अर्को लक्ष्य लिने छन किनकि मेरो वेब साइट चित्रमा प्लास्टर गरिएको छ!"
मकअपडेटबाट - म्याक सफ्टवेयर डाउनलोड साइट।
फेसबुक twitter इन्स्टाग्राम
× उत्पाद (हरू) कार्टमा थपियो → ×